किन फिल्म उद्योग असफल भइरहेको छ Martech Zone
किन फिल्म उद्योग असफल भइरहेको छ
आइतबार, डिसेम्बर 18, 2005 मङ्गलबार, अक्टोबर 21, 2014 Douglas Karr
म र मेरा बच्चाहरू गए र हिजो किंग क saw्गलाई देखें। विशेष प्रभाव र कम्प्युटर द्वारा उत्पन्न ग्राफिक्स एकदम शानदार थियो। मलाई लाग्छ कि चलचित्रको वास्तविक परीक्षण (जुन विशेष प्रभावहरूमा निर्भर गर्दछ) कि यदि तपाईंले आफूलाई कम्प्युटर उत्पन्न चरित्रको साथ समानुभूति पाउनु भयो भने। क Kong्ग, वास्तवमा, आफ्नो चरित्र थियो। मैले सोचेँ अन्त थोरै होकी हो र अन्तिम संस्करणमा दिलको धडकन फेडको उदासी र तीव्रतासँग मेल खाँदैन ... तर सवारी अझै उत्कृष्ट थियो।
मैले मेरा बच्चाहरूका २ साथीहरू लगे र मसँग पनि ++ घण्टा मेरो लागि केही खर्च भयो। चलचित्र सुरु हुनुभन्दा २० मिनेट पहिले थिएटरमा ड्राईभ गर्दै, मेरा बच्चाहरूले ढिलो भइसके भनेर चिच्च्याउन थाले र हामी आफैले भेट्ने सिटहरू। मैले फर्केर भने कि हामीले पहिले "बेस्ट-बाय-स्पोन्डर्ड-टर्न- तपाईंको सेल-फोन-अफ-इडियट फिल्म ", एक्स-मेन for2को लागि पूर्वावलोकन, सफ्ट ड्रिन्क र नाचो (चीजसँग जुन यसलाई आर्मागेडोन मार्फत बनाउँदछ) वाणिज्यिक, र १ movies अन्य पूर्वावलोकनहरू जुन पुनः तयार भइरहेको छ।
त्यसपछि के भयो मेरा बच्चाहरूलाई लाग्यो कि म एक भविष्यवक्ता हुँ। यो एक्स-मेन n't 45 थिएन, यो एक्स-मेन was थियो। पोसेडन, सदा डरलाग्दो पोसीडन साहसिक कार्य, र मियामी वाइस रिमेकको रीमेक, र हेर्नुहोस् ... डेन्जेल वाशिंगटनको साथ एक बैंक डकैती (एक मोडमा)।
के कसैले अन्य आश्चर्य फिल्म किन चल्दै छ? के उनीहरू साँच्चिकै छक्क पर्छन्? साँच्चै? किंग क Kong see (मेरो माईटी जो यंग छोड्नुभयो भने) मेरो बाटोमा, मियामी वाइस (सन्स डोन) पोसेडन ((यदि तपाईंले केही हप्ता पहिले टिभी संस्करण गणना गर्नुभयो भने), X-Men,, र पूर्वावलोकन देख्नुभयो। एक बैंक डकैती फिल्म ????
चलचित्र उद्योगको समस्या यो हो कि यो अब एक आधिकारिक 'उद्योग' हो। यो एक मेचको वरिपरि बसिरहेको बोसो बिरालाहरूको एक गुच्छाको साथ एक उद्योग हो जुन एक अर्ब डलर बनाउन प्रयोग गरिएको थियो र जो निश्चित जीत बाहेक कुनै कुरामा शर्त लगाउन डराउँछन्।
तिनीहरू भन्छन कि जसले इतिहास पढ्दैनन् यसलाई दोहोर्याउन बर्बाद हुन्छन्। मैले सोच्न शुरू गरें कि अमेरिकामा कसैले पनि अब इतिहास अध्ययन गर्दैन। यो देश विश्वास र जोखिम मा निर्मित छ। मलाई एक कम्पनी फेला पार्नुहोस् जसले यो बनायो, र उनीहरूसँग केही उत्तम कथाहरू छन् कि उनीहरू कसरी पूर्ण विनाशबाट एक इन्च थिए।
चलचित्र उद्योगले 'यसको पोर्टफोलियो विभाजित' गर्न आवश्यक छ यदि यो वास्तवमै यसलाई बनाउन चाहन्छ भने। निश्चित ... स्रेक,, रॉकी १०, इत्यादिसँग सजिलो पैसाको लागि जानुहोस् तर अधिक 'स्टार्ट-अपहरू' को लागि फन्डि begin गर्नुहोस्। मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीको श्रीमतीले २००5मा चलचित्र निर्माण गरेको हो, भनिन्छ मान्छे पीडा महसुस कि एक ब्रावो प्राप्त भयो! टोरन्टो फिल्म फेस्टिवलमा पुरस्कार ... तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि मानिसहरू केही प्रतिभा ल्याउनको लागि उनको ढोकामा ठेलमठेल गर्दैछन्!
होईन…। मलाई लाग्छ हामीलाई मियामी वाइस र पोसेडन चाहिएको थियो।
टैग: मनोरंजन / संस्कृतिचलचित्र उद्योग
तपाईको बेलीविक के हो?